bowd 358 ammaanka
Koorta saddex xagal Barrier Buuq
Hagaajiyey Glass Buuq Barrier
Dhawaajiyaan ningax Cotton Barrier
Birta Microporous Buuq Barrier
Color Steel Buuq Plate Barrier
Aluminum Barrier Buuq Plate
Aluminum Barrier Buuq xumbo
Looxa Barrier Buuq Transparent
Sawaxanka Joogtada Control Barrier PNCB
Sawaxanka Ku Meel Gaarka Control Barrier (TNCB)
Warshad Power munaaraddii qaboojinta caqabad loomana baahno
FRP xayndaabka Soundproofing LRM
Soundproofing buundooyinka LRM xayndaabka
Tareenka caqabad loomana baahno
Bowd Soundproofing School (LRM)
Highway caqabad loomana baahno
ooday loomana baahno Communityfactory
unit qaboojiyaha caqabad loomana baahno
Muuqaal caqabad loomana baahno midabo
Hebei warshad 30 sano qiimo hooseeyo mesh biraha silig double, 868 iyo 656 galvanized silig welded Waxyaabaha Product xayndaabka Description: Isticmaalka tayo sare leh Iron Rod sida wax cayriin, guddiga welded, ka dib markii galvanization, budo Primer, iyo budo daahan top; waxaa is-hor taagi kara shucaaca xoqe iyo ultraviolet adag. dhumucda daahan budo waa 100-120 microns sida caadiga ah. The dooran dhexroor silig waa 6mm * 2 + 5mm * 1. 8mm * 2 + 6mm * 1. Waxaa hesha awoodaha sare xoog leh in ay iska caabin dhismaha. Po ...
Hebei warshad 30 sano qiimo hooseeyo mesh biraha silig double, 868 iyo 656 galvanized welded xayndaabka silig
Isticmaalka tayo sare leh Iron Rod sida wax cayriin, guddiga welded, ka dib markii galvanization, budo Primer, iyo budo daahan top; waxaa is-hor taagi kara shucaaca xoqe iyo ultraviolet adag. Dhumucda daahan budo waa 100-120 microns sida caadiga ah. The dooran dhexroor silig waa 6mm * 2 + 5mm * 1. 8mm * 2 + 6mm * 1. Waxaa hesha awoodaha sare xoog leh in ay iska caabin dhismaha.
System Tani badanaa waxay u doortaan Square Post (50 * 50mm, 60 * 60 mili), qaab Post (5mm 80 * 60 * 2, 120 * 60 * 3mm.) Iyadoo xoogga sare iyo wixii la mid ah. Iyada oo u saftay caag ama rainhat saqafka. Dusha la dhammeeyayna ay sida caadiga ah waa galvanized iyo Powder daahan, ama haddii kale.
Bowd Wire Double
Post ee Dhererka
bowd silig -Double leeyahay daahan ah galvanized iyo caag oo matala 130 oo dhumucdiisuna waxay micron in celcelis ahaan.
-Waxaa in kasta oo midabo fii.
meelaha -Standard 1.03m-1.43m-2.03m. meelaha kale ee ilaa iyo amar.
8/6/8 xayndaabka welded
deedka, bowd welded
6/5/6 xayndaabka silig Double
8/6/8 xayndaabka silig Double
Xirxiraan Details & Delivery Details
c. Sida macaamiisha looga baahan yahay
15-20 maalmood ka dib si xaqiijiyay
Company Oo Information Factory
Hebei Jinbiao Dhismaha Qalabka Tech Corp., Ltd waxaa la aasaasay sannadkii 1986, sida silig saarka bowd mesh in Anping oo ah saldhigga ugu mesh silig of China. Health, raalli ahaanshihiisa, guul, xaqiiqada, simpleness, dabeecadda waa daruuriga ka dambeeya Jinbiao ee guusha loo eeliyaa adduunka oo dhan.
In marxaladda hore, JINBIAO macmalay Maritime Bureau oo keliya, iyo horumarinta Shiinaha, tareenka iyo shirkadaha jidadka waaweyn iyo aad u badan ayaa la dhisay. Sidaas halkan yimaado barwaaqada ay kuwa warshadaha xayndaabka. Isla mar ahaantaana, JINBIAO bilaabo safarka ee samaynta dhammaan noocyada kala duwan ee dayrarka. Iyadoo 26 sano halganka, JINBIAO ayaa sumcad aad u wanaagsan adduunka oo dhan.
-Our goolkii: Si loo hagaajiyo heerka warshadaha xayndaabka iyo liibaanay caadi ah.
-Our ruuxa: Caafimaadka, raalli ahaanshihiisa, guul, xaqiiqada, simpleness, dabeecadda.
adeegga -Waxaa fiican, 7 maalmood toddobaadkii dadka qaar ka jawaabi telefoonka, Isniin-Jimco 24 saacadood si aad u adeegtaan waqti kasta.
Previous: bowd 358 ammaanka
Next: deedka ku meel gaar ah
1/2 inch welded Wire mesh xayndaabka
4x4 welded Wire mesh xayndaabka
868 bowd mesh
Airport mesh xayndaabka
Anti Goo welded Wire mesh xayndaabka
Laabaya xayndaabka Wire mesh
Bowd Wire mesh
Field Wire mesh xayndaabka
Security High Wire mesh xayndaabka
Powder dahaarka Wire mesh xayndaabka
PCV dahaarka Wire mesh xayndaabka
PCV Wire mesh xayndaabka
Rfq Wire mesh xayndaabka
Ammaanka Wire mesh xayndaabka
Idaha Wire mesh xayndaabka
Twin Bar Wire mesh xayndaabka
Welded mesh xayndaabka
JINBIAO buuq iyo caqabad aragti ayaa rakibtay ...
Kiiska naqshadeynta codka caqabadda Jinbiao ——Roof ...
Nooca cusub ee muunadda carqaladda dhawaaqa